Beauty blogger | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Business & Economics » Beauty blogger
Posted by zoe on Jul 2, 2011 in Business & Economics, Jobs & Careers, Style & Beauty, World News |7comments
beauty blogger Suhyun Kim zoe
အောင်မြင်တဲ့ ဘလော်ဂါအကြောင်းလေ့လာချင်တယ်ဆိုရင် တောင်ကိုရီးယားမှ မိတ်ကပ် နဲ့အလှကုန်ပစ္စည်း ဘလော့ ရေးသူ Suhyun Kim ကိုစံနမူနာ ယူသင့်ပါတယ် ။ သူမ ရဲ့ ဘလော့ Suhyun Kim’s blog (blog.naver.com/haruna85) ကို ၂၀၀ရ ကစတင် ရေးခဲ့ပြီး တနှစ် အကြာမှာတော့ ကိုရီးယား ရဲ့အကြီးဆုံး search portal Naver,Naver ရဲ့ Power Blogger အနေနဲ့အရွေးခံရပါတယ် ။ အဲ့ဒီ နောက်ပိုင်း လည်းနှစ်တိုင်း အရွေးခံ ရပါတယ် ။ သူမရဲ့ ဘလော့ ဟာ ပျမ်းမျှံတနေ့ ကို hitပေါင်း ၇၀၀ဝ စံချိန်ရှိ ပြီး ၂၀၀ရခုနှစ် မှ အခုနှစ် မေလ အထိဆိုရင်တော့ hit ပေါင်း 8.8 သန်း စံချိန်ရှိ သွားပါပြီ ။
ဘလော့ စရေးရေးချင်း့hit များတဲ့စံချိန် ဘလော့ဂါ ဖြစ်လာတာ နဲ့ပါတ်သက် လို့ Kim က ” အဲ့ဒီတုံး က အလှကုန်ပစ္စည်း ဘလော့ ရေးတဲ့ သူအခုလောက် မများသေး လို့ ကျမ ဒီလိုအရွေးခံရတာပါ ” လို့ပြောပါတယ် ။
Kim(၂ရနှစ်) က သူမဘလော့ စတင်ရေးခဲ့ပုံ ကိုအခုလို ပြောပြပါတယ် ။ အဲ့ဒီတုံး က ကျမ ကောလိပ်ကျောင်းပိတ်ရက် ဇာတိမြို့(Jeonju)မှာယောင်ချာချာ ဲ့ပျင်းပျင်းရှိတာနဲ့ ကိုယ်ဝါသနာ ပါတဲ့ မိတ်ကပ် အကြောင်း ကို ဘလော့ စ ရေး မိပါတယ် ။
ပထမတော့သူမရဲ့ ဘလောမှာ အများနည်းတူ အလှကုန်ပစ္စည်းweb-site တွေကပုံ တွေ ကိုကူးတင်ပါတယ် ။ နောက်တော့ မိမိရဲ့ထင်မြင်ချက် တွေပါရေးတင် ပါတယ် ။ နောက်တခါ ပရိတ်သတ် ရဲ့တုန့်ပြန်မှု အရ အလှကုန်ပစ္စည်း ရဲ့် အရောင်အသွေး အမျိုးအစား ကိုပို အလေးထား ထင်မြင်ချက်တွေပိုရေး ပါတယ် ။ တဆင့်တက်ပြီး စက်ရုံကထုတ်လုပ်တဲ့နှစ် နဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း အမျိုးမျိုး အဆင့်ဆင့် ချယ်သပုံ ကိုလည်း ဘလော့ ပေါ်တင် ပါတယ် ။
Kim ဟာ public relationကုမ္ပဏီ တခုမှာ အငယ်တန်း မန်နေဂျာ အဆင့်ရှိသူ ပါ ။ အလုပ်ပိတ်ရက် မှာတပါတ်စာရေးဖို့ဘလော့အတွက် ဓာတ်ပုံတွေစုဆောင်း တယ် ။ အလုပ်တက် တဲ့ နေ့တွေမှာ တော့ ရုံးကနေ့လည်ထမင်း စားချိန် နဲ့ ရုံးဆင်းညပိုင်း အိမ် မှာ ပို့စတင်ပါ တယ် ။
သူမ က ဆက်ပြောပါတယ် ။ ဒီဘလော့တင်တဲ့အလုပ်သာမရှိရင် ရုံးအလုပ် နဲ့အိမ် ၊ ဈေးပါတ် ၊ သူငယ်ချင်းတွေ နဲ့ထမင်းစား ၊ ဒါနဲ့ပဲ သံသရာလည် ပြီး အတော်ငီးငွေ့ဖို့ကောင်းနေမှာပါ ။ အခုတော့ ကိုယ်ဝါသနာပါတဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေရတာကိုယ့်ဘဝ ဟာပိုစိုပြေပြီး ဘဝကိုတန်ဘိုး ရှိအောင်အသုံးချနေတယ်လို့ ခံစားရပါတယ် ။ ပစ္စည်း တခုကို ဝယ် တဲ့နေရာမှာ လူတယောက်နဲ့တယောက် အကြိုက်ချင်း မတူတာကလည်း စိတ်ဝင်စားဖို့အကောင်းသား ၊ တချို့က အရည်အသွေးကိုရွေးတယ် ၊ တချို့က တံဆိပ် ကိုရွေးတယ် လို့ပြောပါတယ် ။
အခုတော့ ပြည်တွင်းပြည်ပကုမ္ပဏီ တွေက ပစ္စည်းအသစ်ထုတ်ရင် ဘလော့ပေါ်မှာ review တင်ဖို့သူမဆီ အပ်ကြပါတယ် ။သူမကိုယ်တိုင်ကလည်း review လုပ်ဖို့ စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်း တဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ပစ္စည်း အသစ် အဆန်း ကကိုရီးယား မရောက်သေး ရင် နိုင်ငံခြားက သူငယ်ချင်းတွေအကူတောင်းလေ့ရှိပါတယ် ။
review လုပ်ဖို့ စုဆောင်းထားတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်း တွေဘယ်တော့ သုံးကုန်မှာ လည်းလို့အင်တာဗျူးလုပ်သူမေးလိုက်တော့ အဖြေက ကုန်အောင်မသုံးနိုင်ပါဘူး ။ စုဆောင်း ထားတဲ့(collection) သဘောပဲ ထားပါတယ်တဲ့ ။
မှီငြမ်းကိုးကား လင့်ခ ခရက်ဒစ် beauty-eye-beauty-blogger-133514
One of Korea’s most prolific beauty bloggers talks about the evolution of her blog and what motivates her to keep up the high-maintenance hobby
By Jee Abbey Lee9June, 2011
Suhyun Kim,aprolific beauty blogger since 2007.
She racks up 7,000 visitsaday on average, with an accumulated 8.8 million hits as of mid May this year. Such is the attention Suhyun Kim’s blog (blog.naver.com/haruna85) attracts with its make-up and skincare product reviews.
“I have always loved make-up and thought, ‘I will just try it,’” says Kim, 27, reminiscing about how she got into blogging. “You see, I wasacollege student on vacation without much to do back home inasmall city.”
Kim’s prized possessions.
In late 2007, the Jeonju native started posting reviews of cosmetics on her blog. A year after that, she became one of the first batch of 1,083 Power Bloggers, selected by Naver, Korea’s biggest search portal, which has renewed her title every year since then.“I think I got lucky because there weren’t that many beauty bloggers back then,” says Kim.
Kim writes her blog during her lunch hour at work or on weekday evenings.
At first, Kim followed the general format of beauty bloggers worldwide; using an image provided by the cosmetic brand’s website and writing her opinions below. Through visitor feedback, however, she soon realized they wanted to see more.The detail-oriented blogger now takes close-up photographs to show the shades, shimmers, and textures of products such as lipsticks and facial creams. For “how-to” posts, she also includes step-by-step pictures of her make-up procedure.
Kim also includes names of manufacturing companies, who get commissioned by different brands to make products at their plants. Many customers often have their preferred manufacturer, according to Kim.
“I absolutely have to include the date of manufacture. Although most [cosmetics] products are good for up to two years after the date, people tend not to buy something madeayear ago,” says Kim.
Kim’s make-up pouch with items used for touch-ups throughout the day.
While she spends her days working ataPR company asajunior manager, she manages to publishanew post almost every day by takingaweek’s worth of photos on the weekend and posting them throughout the week.The petite cosmetics enthusiast says the time and energy invested is worthwhile.
“To be honest, life can get pretty monotonous,” she says. “Work-home, work-home, dinner with friends, and some shopping when there is time. But when I see my life through the photos and writings on my blog, I feel more assured that I am living it to the fullest — taking upahobby and spending quality time with friends and family.”
“The fun part is sharing thoughts on what drives people to makeapurchase,” says Kim. “For example, [holding up her mug of Americano,] I could have bought it for the taste, but another person could have chosen it because of the coffee shop’s brand.”
Rare items Kim got through her friends living overseas. The lip balm took her three months to receive from the United States, and she is not even using it.
Since aboutayear ago, Kim has been offered products to test and review on her blog. Many companies, both local and global, hand out new products to bloggers in the hope of building hype around it.With so many free products to choose from, what does Kim buy with her own money?
“I often check out on-line sites of department stores and brands I love. Since most brands accept reservations for upcoming items these days, I take advantage of the services to buy the latest and special-edition items.”
When an item is not for sale in Korea, Kim will seek help from friends overseas.
“I just had to get this one lipstick from Japan and asked my friend there to ship it to me,” says Kim. “I also asked my friend in the United States to get two flavored lip balms because the packaging was so adorable and the idea brilliant.”
When asked if she thinks it will takealong time to finish using the things she has bought over the years, the usually voluble Kim pauses foramoment before answering.
“Well, I do not expect to finish them. They are more like my collections.”
Read more: Beauty in the eye of the blogger | CNNGo.com http://www.cnngo.com/seoul/shop/beauty-eye-beauty-blogger-133514#ixzz1PXyDV2s5
ကျနော်ကတော့ လူကိုတန်ဖိုးထားလို့ ဘလော့ဂါမလေးကို ရွေးပါတယ်။
ဒါလည်း ရာနှုန်းများများ ပါမှာပါ ။ ဟုတ် ။
Beautiful blogger ပါလား..
ဗျူးတီးမဖူးရင်ကော ဗျူးတီးဘလော့ဂါ ဆိုပြီး နာမည်ကြီးပါ့ဦးမလား မသိ..
သူကြီးပြောသလို မတူတဲ့အတွေးနဲ့စာချရေးလိုက်တာလဲ ပါတာပေါ့လေ..
ဟုတ်ပါတယ် ။ ဒါလဲအောင်မြင်ရတဲ့ အကြောင်းမှာပါ ပါတယ် ။ beauty blog ဆိုပါမှ ဘလော်ဂါကလဲ beautifulဲဖြစ်တော့ပိုအောင်မြင်တာပေါ့ ။ beautiful beauty blogger လို့ဆိုရင်လည်းမမှားပါ ဘူး ။ သူ့ရဲ့လုပ်နည်းလုပ်ဟန် တွေကလည်း အတုယူဖို့ကောင်းပါ တယ်။ ကိုယ့် တင်မဲ့ဘလော့ ရဲ့ material အပေါ်စိတ်ဝင် စားမှုရှိတာ ၊ ပရိတ်သတ် တုန့်ပြန်မှု အရ ပြောင်းနိုင် တာရယ် ၊ ဇွဲရှိ တာရယ် တွေကို အတုယူနိုင်ပါတယ် ။ သူ့မှာ passion, motivation, flexibility, နဲ့ persistence ဆိုတဲ့အရည်အချင်းတွေရှိတာတွေ့နိုင်ပါတယ် ။
သူ့ဗျူးတီးက ကုန်ပစ္စည်းမဟုတ်ဘဲ လူကိုပြောတာလားဟင်????